२० जापानमा गर्नु पर्ने उत्तम चीजहरू र कसरी आरक्षण गर्ने - Best of Japan
बाँस वन। क्योटो, जापान = शटरस्टकमा बाँस वनमा जापानी परम्परागत किमोनो लगाएको एशियाली महिला
जापानको यात्रामा तपाई धेरै चीजहरूको आनन्द लिन सक्नुहुनेछ। ती मध्ये, तपाई कुन प्रकारको कुराको लागि आफ्नो यात्रा योजना बनाउने चाहानुहुन्छ? यस पृष्ठमा, मैले गणना गरें जुन तपाईं जापानमा आनन्द लिन सक्नुहुन्छ। कृपया तपाईले रूची राख्नु भएको वस्तुको छविमा क्लिक गर्नुहोस् र अधिक विस्तृत जानकारी प्राप्त गर्नुहोस्।
टिकट र भ्रमण बुकिंगका लागि आधारभूत जानकारी
२० जापानको यात्रामा तपाईले आनन्द लिन सक्ने उत्तम चीजहरू
किमोनो लगाएका अज्ञात विदेशी पर्यटक, जापानको राष्ट्रिय परम्पराको पोशाक सेन्सोजी मन्दिरमा टोकियोको प्रसिद्ध मन्दिर, शटरस्टकमा हिडे
जापानमा तपाईले केमा रमाईलो गर्नुपर्दछ भनेर वर्णन गर्नु अघि कृपया तपाईको यात्रालाई रमाईलो बनाउनको लागि एउटा आधारभूत जानकारी बारे सतर्क हुनुहोस्। त्यो कसरी विभिन्न टिकटहरू र टुरहरू बुक गर्ने बारेमा छ। म यस लेखलाई निम्न लेखमा प्रस्तुत गर्दैछु, त्यसैले कृपया तपाईंलाई रुचि छ भने ड्रप गर्नुहोस्।
त्यसो भए, तल, म तपाईंलाई सिफारिस गर्दछु कि २० चीजहरू सूचीबद्ध गर्दछु। यदि तपाइँ प्रत्येक छविमा क्लिक गर्नुहुन्छ, तपाइँ सम्बन्धित लेखमा जान सक्नुहुन्छ।
यस पृष्ठमा, म तपाईंलाई जापानी खाना र पेय पदार्थहरूको परिचय दिन चाहन्छु। जापानमा उच्च श्रेणीको खाना जस्तै सुशी र वाग्यु ​​गाईको मासु र ओकोनोमियाकी र टकोयकी जस्ता सामूहिक खाना सम्म धेरै धेरै मौलिक खाद्य पदार्थहरू छन्। यस पृष्ठमा, मैले छविहरूका अतिरिक्त विभिन्न भिडियोहरू पोस्ट गरे। ...
के तपाईंले जापानको होक्काइडोमा सुन्दर फूल बगैंचाको बारेमा सुन्नुभयो? यस पृष्ठमा, म पाँच प्रतिनिधि फ्लोर साइटहरूको परिचय दिनेछु। जापानमा चेरी फूलहरू मात्र सुन्दर फूलहरू हुन्। यदि तपाईं शिकिसई-नो-ओका वा फार्म तोमितामा जानुहुन्छ भने, तपाईं निश्चित रूपमा इन्स्टाग्राममा पोष्ट गर्न चाहानुहुन्छ। त्यहाँ सुन्दर फूल बगैचा छन् ...
दुई जवान जापानी केटीहरू रातो कार्पेट फ्लोरमा जापानको क्योटो, एनकोजी मन्दिरमा शरद umnतु रंगीन पत्ते जापानी बगैचा हेर्न र मजा लिन बसे। यहाँ रिन्जाई जेन सेक्ट छ र गिरावट मौसम = शटरस्टकको समयमा धेरै प्रख्यात छ
ओन्सेन (तातो वसन्त)
जापानको कोस्प्ले उत्सवमा चरित्रको रूपमा कोस्प्लेयर। कोस्प्लेयर प्रायः एक उपसंस्कृति सिर्जना गर्न अन्तर्क्रिया गर्दछन्, र "कोस्प्ले" शब्दको व्यापक प्रयोग, ओसाका, जापान = शटरस्टक
मनोरंजन पार्क र थीम पार्क
जापानमा विश्वका शीर्ष थिम पार्क र मनोरन्जन पार्कहरू छन्। ओसाका र टोकियो डिज्नी रिजोर्टमा युनिभर्सल स्टुडियो जापान विशेष गरी प्रख्यात छन्। यसका अतिरिक्त, म स्पटहरू पनि प्रस्तुत गर्दछु फुजी-क्यु हाइल्यान्ड जुन तपाईंले माउन्ट हेर्दा खेल्न सक्नुहुन्छ। फुजी सामग्री टोकियो डिज्नीको तालिका ...
समुराई र निन्जा अनुभव
टोकियो = शटरस्टकमा पारम्परागत डोजोमा समुराई प्रशिक्षण
जापानमा धेरै लोकप्रिय एनिमेसन र मंगा छन्। यदि तपाईं एनिमेसन र मa्गामा रुचि राख्नुहुन्छ भने जापानमा यात्रा गर्दा तपाईं किन सम्बन्धित सुविधाहरू र पसलहरूमा जानुहुन्न? मलाई लाग्छ कि यो स्थानको भ्रमण गर्न पनि चाखलाग्दो छ जहाँ ठूलो हिट एनिमे अवस्थित छ। यसमा ...
जब तपाईं जापान मा यात्रा गर्नुहुन्छ, जापानी खेल हेर्न वा आफैंमा खेल गर्न पनि चाखलाग्दो छ। यस पृष्ठमा, म तपाईंलाई तीन रोचक खेल घडी र पाँच खेल अनुभवहरूको परिचय दिनेछु। यदि तपाइँ खेलकुद मनपराउनुहुन्छ, जापान मा यिनीहरूलाई किन प्रयास गर्नुहुन्न? तालिका सामग्री पुस्तक टिकट र तपाईं अघि टूर ...